Kuyini Sakura futhi Japanese kuka kuyabiza
A uphawu isiko Japanese
Namuhla, ngokoqobo noma ubani angaba ukuphendula umbuzo yini cherry. Ekupheleni kuka-March no-ekuqaleni kuka-Ephreli, ukukhuluma ngakho kakhulu ikakhulukazi. Bonke babeke bezwa ukuthi kwenzekani entwasahlobo ngoba Japanese isimangaliso sangempela - kwesheri. amafu amhlophe-pink enhle yezimbali amboze izingadi namapaki. Uyini cherry Japanese futhi iyini zingabantu abathandekayo ngakho? Zama ukuqonda.
Lokhu cherry Japanese Sekuyisikhathi eside libhekwe abaningi njengoba iwuphawu isiko zaseMpumalanga, nezimbali zalo eJapane kuyiholide ozithandayo. Sakura Sekuyisikhathi eside adunyiswe e tinkondlo netingoma, ebukisa kule imidwebo abaculi engcono. Yena enikelwe eziningi nemidanso Japanese.
Ezinye izazi-mlando zikholelwa ukuthi indlela yokuzinikela cherry owasungula kudala ngokuqondene ekuqaleni umjikelezo entsha yezolimo. Iqiniso liwukuthi nje ngasekuqaleni kuka-Ephreli, amaJapane cabanga ukufika lokhu entwasahlobo. Ngalesi sikhathi futhi eziqhakaza sakuba nezimbali ezimhlophe cherry wendawo. Kwakucatshangwa ukuthi yokubukisa okungaphezu kokuphonswe yibo eziqhakaza, yomwatshi nokuvuna ophana kakhulu kuyoba. Ngakho-ke, abanye ngisho wakhuluma izihlahla, babedansa sacula nezingoma ngenhloso placate kubo futhi ngaleyo ndlela ukunikeza ngokwabo ukudla kunyaka ozayo.
Uma nicela noma yini iningi labantu Japanese okungukuthi Sakura, cishe bonke of them uzokutshela ukuthi - abode imiphefumulo wawoyise. Laba bantu abakholelwa: bencoma izimbali ezinhle ukuthi ukuxhumana izihlobo zawo esezashona, ukubabuza umusa ukuphila emhlabeni, uzizwa ubunye nabo.
Ukuze Japanese eziningi, owayehlala kancane bacebe kakhulu abalimi elula, impendulo yombuzo othi: "Kuyini Sakura" kwaba kancane ezahlukene. Bakubheka njengenjabulo iwuphawu transience inexorable zokuphila. Japanese kwesheri izinsuku eziyisihlanu kuya kweziyisikhombisa kuphela, bese kusetha kabusha okhanyayo pink amacembe kwabasha utshani asphalt izindlela. Abaningi bakholelwa ukuthi cherry - Ukufana kwesimo nalokho okukhulunywa ukuphila komuntu: kunjengoba enhle nje, kodwa futhi iDemo.
abalimi Modern wazile izinhlobo phezu abayikhulu namashumi ayisihlanu, cherry, okuyinto zingafani color, ubukhazikhazi, izimbali, ezahlukene izintandokazi zezulu nabanye. Noma yimuphi Umhlahlandlela Japan iphawule yakho yokuthi iningi lawo izinhlobo ingatheli, futhi isiphethu ekuletheni aesthetically olumnandi contemplatives ethobekile. Ngo zindawo yethu ngokwemvelo ukuhlangabezana Sakura kuyinkinga, akunakwenzeka nakakhulu. Ngezinye ithenda yakhe efihlekile zifana kakhulu inyoni cherry yethu izimbali. Noma kunjalo, sinokholo akekho ofuna ngandlela-thile uye ehlathini futhi ujabulele izimbali ezimhlophe ezinephunga elimnandi.
Nayo ukuthi cherry, kufanele nazo ziyakhuluma welithi "Hanami". Lonke Lesi ukunyakaza (uma ufuna, noma inqubo nokufundisa) ekuthandeni izimbali eJapane. Lapho lezi noma ezinye izidalwa ezimangalisayo bemvelo yokuqhuma, bendawo bazungezé kubo futhi ukuhlela umkhaya uyoshaywa umoya kumnandi. Nalapho futhi edla, ephuza iwayini, ukuxoxa nomndeni, ukukhuluma nomunye ngamazwi anomusa, noma umane buthule, obheka amafu okhanyayo-pink izimbali, a intela imvelo nobuhle.
Ngeshwa, emphakathini wethu siye ithuthukiswe umbono omncane ezahlukene namanye esake sawenza sisendleleni.
Amorpha fruticosa isitshalo futhi isebenza imithi
Baphi Golden Ezintabeni Altai? Photo Golden Ezintabeni Altai
Impumuzo sezulu Estonia
Silicone amafutha izimvu zamanzi zenjoloba. Universal Silicone Amafutha: yokusetshenziswa
Oasis Nessebar 3 * (Bulgaria / Nessebar): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza
Iphrojekthi "Dari Beri": ukubuyekezwa, ulwazi jikelele
Amanyuvesi eMoscow ngezindawo isabelomali kanye ehostela: amanyuvesi zomphakathi kanye nezikhungo
I-Metropolitan Hilarion yaseKiev: biography (isithombe)
Crossovers Chinese. ukuncintisana
Okuhle Russian comedy - a namafutha ukuze umphefumulo